Ogaden News Agency (ONA) – Siminaarkii Hawlwadeenka JWXO ee Qaarada Yurub Uga Socday oo Guul Kusoo Dhamaaday.
Siminaarkii Hawlwadeenka JWXO ee Qaarada Yurub Uga Socday oo Guul Kusoo Dhamaaday.
Posted by ONA Admin	/ April 14, 2014
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 13/4/2014, lagu soo gabagabeeyay siminaar iyo aqoon iswaydaarsi si wanaagsan loosoo agaasimay oo socday mudo sadex bari ah. Siminaarkan oo furmay maalintii Jumcaha ahayd ooy taariikhdu kubeegnayd 11/4/2014 ayay ahayd ujeedada oogu wayn ee looga gollahaa kobcinta iyo kor uqaadista wacyiga iyo bisaylka Hawlwadeenka iyo Masuuliinta JWXO ee kudhaqan qaarada Yurub.
Sidaan horaanba idiinku soo gudbinay warbixinadaanadii hore wuxuu siminaarkan aha mid ahmiyad balaadhan oogu fadhiyay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaden (JWXO). Wakhtiga siminaarkan lasoo bandhigay yaa laftigeedu aha amid mudnaan gaar ah oogu fadhiya geedi socodka hawlaha Halganka Somalida Ogadenya iyadoo aad looga dayrinayo xaalada uu Gumaysiga kusuganyahay.
Waxaa siminaarka siwanaagsan ooga qaybqaatay Madax iyo Masuuliin aqoon iyo khidrad dheer uleh guud ahaan sooyaalka taariikhda halganka Ogadenya. Madaxdii Aqoon-kororsigan soo qabanqaabisay isla markaana cashiro aad uqiimo badan kabixiyay waxaa hormuud u,ahaa Lataliyaha Gudoomiyaha JWXO, General Cabdullahi Mukhtaar. Wuxuu Jananku lawadaagay kaqaybgaleyaasha siminaarkan duruus aad utayo wanaagsan kusoo kusaabsanaa Maaraynta iyo Wadashaqaynta Hay,adaha iyo Hogaanada kala duwan ee JWXO.
Duruustii kale ee aadka uqiimaha badkaa ee simnaarkan lagusoo bandhigay waxaa kamid ahaa cashiro kusaabsan kor uqaadista Waxqabadka Xubnaha, Iskaashiga iyo Xidhiidhka Toolmoon, Kahhortaga Dacaayada iyo Borobagaandaha Gumaysiga. Sidoo kale waxaa si faah faahsan looga wada dooday waxqabadka Jaaliyaadka Yurub iyo sidii looheli lahaa ama looxoojin lahaa waxqabadkooda korna loogu qaadi lahaa awooda Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee kahawlgala Qaarada Yurub.
Maalintii 3aad ee simnaarkan yaa lagufuray warbixin dheer oo Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO), Adminal Maxamed Cumar Cisman uu kulawadaagay madaxda iyo hawlwadeenka Jaaliyaadka JWXO ee Yurub warbixin meelo badan taabanaysa. Warbixinta oo kuqabsoontay dhanka qalabka isgaadhsiinta yuu gudoomiyuhu siwaafi ah ooga warbixiyay xaalada Ogadenya, xaalada Gumaysiga iyo waajibaadka saaran Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee kudhaqan dunida dacaladeeda gaar ahaan Yurub.
Warbixinta Gudomiyaha oo ahayd mid aad uxiisa iyo xamaasad badan aadna oogu riyaaqeen kaqaybgaleyaashii madasha fadhiday ayuu Gudomiyuhu siwanaagsan ooga xog waramay warbixinadii oogu danbeeyay ee Ciidanka wadaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO) iyo xaalada uu kusugan yahay shacabka kudhaqan gudaha Ogadenya ee kuhoos jira Gumaysiga aan naxariista iyo raxmad toona aqoonin ee Itoobiya.
Mudadii uu siminaarkan socday waxaa garab socday ookale kulamo iyo doodo furan oo xubnaha iyo masuuliinta dhexdooda ay iswaydaarsanayeen. Waxaa kale oo shalay ay si faah faahsan usoo bandhigeen kaqaybgaleyaasha kulankan aragtidooda iyo waxyaabihii ay kafaa,iidaysteen mudadii uu Aqoon-iswaydaarsigan socday ee sadexda bari ahayd. Waxaa la,isku raacay guud ahaan in lajoogteeyo siminaarada iyo Aqoon-iswaydaarsiga noocan oo kale ah si loohelo xubno isku meel biyuhu ujoogaan oo sigarbasiman ah uwada gudanaya waajibaadkooda halgan.
Dhanka kale waxay Madaxdii madasha fadhiday balan qaadeen in munaasabadaha noocan ookale ah iyo siminaarada kusalaysan Aqoon-Iswaydaarsiga lajoogtayn doono Haduu eebuhu yiraahdo. Guud ahaan waxay u ahayd xubnihii kasoo qaybgalay siminaarkan fursad qaali ah oo waxbadan kusoo kordhisay khibradooda iyo waxqabadkooda intuba.